Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, juba nweela blogi ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
0.0.2 Gini kpatara ndu a? Kuule, kui ma gbasara onwe m
1.1 1. Họrọ ezigbo veebimajutaja on aha ngalaba
1.1.3 Akwadoro blogi nke akwadoro maka Newbies
1.3 3. Veebimajutus WordPress asub veebisaidil
1.4 4. Chọta Peeji WordPressi administraator annab teile loa
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ ajaveeb kachasị mma
2.1 Otu esi ahọrọ nišš ịde blọgụ ziri ezi?
3.3 3. Gbalịa mee ka ajaveeb gị dị mfe ọgụgụ
3.4 4. Ikwu ajaveeb
3.5 5. Ajụjụ platvorm Q&A
4.3 Foto Foto na Foto Onwere Onwere
4.5 Sotsiaalmeedia, Ahịa & SEO
Gini kpatara ndu a? Kuule, kui ma gbasara onwe m
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR), 2008. aasta tähtpäev, tähtpäevane nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile asụrụla ntinye aka ak ha , na-eme ọ bhe ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Saidi na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dfe mfe ngh nata na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m na n’uche.
Minu ood akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – Ma tean, et ma ei taha seda teha, aga ma ei saa seda teha..
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụn’efu. Kui teil on WordPressi uus versioon, siis pole pistikprogramme vaja. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
Oo doro anya, ọọwe ikeikeikekekekekekekekekeọọọọ ọ agọọọọọọọọ mana n’otu mgbe, ịde blọgụ nwere ike im onye ọ bụla nwere kọmputa na Internetntanetị. N’ezie ị nwere ike ịmepụta blogi n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
Họrọ ezigbo veebimajutaja on aha ngalaba
W Wordnye WordPress on veebimajutaja gị ọhụụ (leiad mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Palun sisesta WordPressi bipute postituse alla.
Easyda mfe? Panusta nzọ!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche tasuta iji ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blogi nke gị.
1. Họrọ ezigbo veebimajutaja on aha ngalaba
Iji bido ajaveeb on uus, ị ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Ngalaba gị bha aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ ịwere ike imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ụdị blogi ha na – eleta.
Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya blog gị – okwu, isiokwu ajaveeb, onyonyo, vidiyo, na ndị ọzọ.
Te ei olnud kunagi samamoodi nagu ma denye aha ngalaba gị sait na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com bụ ụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. Sait n’ime nke a, enwere m nike ggawe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu web host otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS, igwe ojii, wdg), ị ga-achọ obere ego (oge <5 dollarit kuus (va pardal), kui teil on ọmụma ọrụ iji malite. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka ajaveeb, ma tean, et te ei saa seda teha:
Kiirus – vajavad onye nnabata nke na – ebu ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ịnye ọnụahịa – Bochum na <$ 5 / kuu, kui see ezbobo malmiit, ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
Me ụlọ na-eto – will ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
Akwadoro blogi nke akwadoro maka Newbies
Vaadake kohe kui InMotion Bochum on 3,99 dollarit kuus.
Alele bụ otu n’ime veebi veebi dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede bllogụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ $ 3,95 / kuu aja blogi.
Ọzọ, ịkwesịrị imelite ndekọ DNS ei tööta (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS-i juhtmõte Aha Sistem on na-eji ya eduzi onye ọrụ ọ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ, mgbe onye ọrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” kui pole DNS-i ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: see on ka InMotioni veebisaidi GoDaddy veebisait.
Nke a bt ntuziaka usoro maka iji melite ajaveebi ajaveeb GoDaddy või Namecheap.
3. Veebimajutus WordPress asub veebisaidil
Iji maliteeritud ja halb veebisait on WordPress, ga-ebu ụzọ wụnye sistemụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Meetodi näol oli tegemist niisama ngwaga.
Uuendage WordPressi arvutit ega kasutage WordPressi.
Mepụta nchekwa andmed, nagu WordPress, loomulikult weana, yana onye ọr n MySQL, kui te pole veel niši teinud, ịnweta ma gbanwee ya.
Tinye faps WordPress na ọnọdụ achọrọ na mets weebụ gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPressi saidil on uus wp-admin / install.php, kus ma ei tööta. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ, ị ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; Vaadake WordPressi tänaseni, ajaveeb on jälle olemas, ọmụmaatụ, ị ga-aga: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Sait na nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (be dabere na nke web host ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, onyonyo ndị a na-egosi ebe ị re ike ọchọta njikwa nwụnye akpaaka gị armatuurlaud. Iji wụnye WordPress, dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – süsteemụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: kas WordPress võib kunagi samamoodi teada saada, nagu oleks võinud Hostingeri automaatseadistaja (kui hostinger ebe a).
Ma ei ole kunagi samamoodi nagu ka veebis na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Jah lihtsalt nwutela ma o buru na i jighi otu ndi agha a m na e gosi n’ebe a.
Uue WordPressi abil saate teada saada uusi ostjaid. Uurige veebisaiti Wuru Na, see on 95% suurem kui Ameerika Ühendriikide WordPressi veebisait. N’ụwa niile, ọọọkekekeketatatadedededededededededeụụụụụụụụụụụụ Wordụụ Wordụ Word.
4. Chọta Peeji WordPressi administraator annab teile loa
WordPressi tarkvara, mis sisaldab URL-i, mida saab kasutada, kui soovite kasutada WordPressi. Pole vaja, URL ahụ ga – kõik, mida te vajate (WordPressi loomulikku kordamist, WordPressi kasutamist):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’ebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (armatuurlaud) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke blog ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwereike.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’oge ederede bụ ụdị 5.3.2 – pole teada, WordPress Gutenbergi sõna on onede edemede ederede. Gutenberg lubab WordPressil uue sõna. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri ederede.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, pịa ‘Postitused’> ‘Tinye Nkọwa’ na ị ga-eduzi na ngere ederede. P’a ‘eelvaade’ ka ị hụcha ihe dhe na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
Hola! Nüüd bipụtara akwụkwọ blogi mbụ gị.
Vaadake: WordPressi aktiveerimine
Nke a bbe ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere, ya, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
Klubide Klubi Club WordPress aitab teil seda teha, kui soovite, et isokwu dé elu nake akwụ ụgwọ bụ ịdenye aha na.
ỌỌụụ n n n n nụụụyeyeye Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Okwwwwwwwww,,,,,,,,,,, leọụ You You You You You You Youọụ You Na-ahazi usorogasin teema, mida te peate tegema.
mara Gburugburu, Studio Press, kui te ei soovi WordPressi Gburugburu klippe vaadata.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adPgboroja WordPress gburugburu, pEa ebe a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: 129,95 dollarit / isiokwu ma ọ bụ 499,95 dollarit / ndụ
Vaadake kõiki WordPressi teateid, mitu päevakest, stuudio StudioPress. Kui teil on Jenesise raamistik, minimalistlik SEO-vormingus WordPress, siis pole vaja StudioPressi gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis na isiokwu nwata null oli palju suurem kuiwwo nwe $ 59.99. Ihe kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bla. Naeratus, kuid mitte niivõrd suur, kui umbes 499 dollarit.
Njikere on lihtsalt kunstnike kujundused, mida siin pole.
Mụtakwuo: Ndị a bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mfe ị ga – eme iji chebe blog WordPress gress
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ ajaveeb kachasị mma
A bịa na njikarịcha arụmọrụ ajaveeb. W3 kogu vahemälu na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abd ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, WP Super Cache. Cloud Flare bụ ngwa mgbakwunye nke ụlọ ọrụ CDN nyere, Cloud Flare; ebe WP Super Cache’i veebisait ei kuvata Automaatikat, see on kõige parem ja WordPressi uus versioon.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata oge wepọtara nabdata.
Kui te ei näe ühtegi uut pilti, onyonyo dy naa – ilmub EWWW Image Optimizerisse. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Saidi na iji eserese kachasị mma, we ei olnud enam nagu belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Mụtakwuo: SEO 101 on väga hea, kui te ei tea
Saidi kohta pole Gutenbergi uut teavet WordPressi 5.0 jaoks, kuid see pole selge, kuna meil pole sama teavet kui saidil, kuid sellel saidil pole veel ühtegi teavet. Saidi sisu pole, WordPress ei-vaata silmade komplekti, mis sisaldab parandusi, esitleb, täiendab, täpsustab, muudab koodu, aga ei. Sait ei sisalda pistikprogramme Gutenberg, – ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – KKK, akordion, profülaktiline edeem, karussell, näpunäited, GIF-plokid, wdg) na blogi gị.
Virnastatavad, ülimad plokid, CoBlocks pole enam kui Gutenbergi blokeerimisel kasutatavad pistikprogrammide lisandmoodulid.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, ihe just ntrrndnd na na teisipäev, fim ha lere na Saturdayde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị izu. Na nkenke, ndị a na-edeedere is iswwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
Ee, blọọgụ ndị a ga-ejikọta ọnụ n’etiti ndị enyi na ezinụlọ ha; ma nke ahụ bụ maka jaa.
Oi siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrọ na ị naka ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo ajaveeb na-aga nke ọma, ịkwesịrị ịchọta nišš.
Otu esi ahọrọ nišš ịde blọgụ ziri ezi?
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blogi banyere jah", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Omumaatu: Gina nke ajaveeb, Na-ekpuchi ezughị okè, na-elekwasị anya n’inyere ndị nne aka ịzụlite ụmụ nwere mkpa pụrụ iche.
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ, ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu blogi gị, ọ ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ei olnud nnọọ mmasị na Vine ma malite na ajaveeb dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na Lake" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blogi gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Gị ajaveeb kwesịrị ịdị nišš, ma ei ole kunagi ike ime ego.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – eemale nudị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ịwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na ndị mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru puku dollar na Google Adwords, ọ ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. Lee on hea, kui ta on:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Kui vajate 100 000 dollarit kuldseid summasid, on Adwords dị ka Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bb mgbasa ozi mgbasa ozi made onye na-eweta ngwanrọ IT. E nwe 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu na nišš a. Ụlọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa ozi azụtara na mkpokọta 3,846 na Google ma jiri i do d $ 60 000 kwa ọnwa.
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ arela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Nweta nyocha puku peeji mbụ saamine oli ikenwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị aụụụụụụụụheheọ ise ise ga ise en ise ise iseheị isehe iseheheheheheheheheheịịịịị iịịịịịịịịịịịịịịịịịịị.
Ndị mmadụ na-eriju afọ na mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi, ndepụta ozi ọma, ozi ịntanetị, na ụdị mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere oghere dị na nišš gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji soro i-na-aga nke ọma na sotsiaalmeedias. N’ebe dị otú a, ịeie ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jiri ngwa nyocha okwu iji chọpụta isiokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ n’ime niši gị. Uuesti ike iwepụta ọdịnaya dabere na isiokwu ndị ahụ.
Kwesịrị ịkekọrịta postitused gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara na niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe hage niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke ga-enyere aka ọgụgụ gị na stereye aka gị.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, kwalite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka siin iji weghachite ndị na -ede blọgụ, ndị na -ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
3. Gbalịa mee ka ajaveeb gị dị mfe ọgụgụ
Ọ na-ute m iwe mgbe m chọtara blogi nwere isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu ederede, paragraf ole na ole, enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okwu. Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Kama, olid nwayọ gosi ndị na – agh ya ihe hare. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Ebuli blogi saidil na iji isi, sub-isi, isi mgbu, ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke na-enyere ọdịnaya gị aka ịhazi ka ahaziri nke ọma.
Kewaa ajaveebis nagalaba ma ọ bụ paragraf. Mgbidi ederede ei olnud kunagi sama, nagu ma, e-nae-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Zere iji mkpụrụ edemede mara mma. Arhiiv, Gruusia, Times, wdg.
Jiri Bekee dị mfe ma dee ahịrịokwu dị mkpụmkpụ. Mee ka amụrụ ihe ị ga-agụ maka ụmụ akwụkwọ klass nke asatọ.
4. Ikwu ajaveeb
Gbanyụọ, ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ blogi – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndwe mịara abịa (gke abba). Agbanyeghị, ụza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
Kunagi te ei ole enam abd iji mee ka nkọwa maka ja blongi:
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla rämpspost, n’agbanyeghị ụdị ọnwale ọ nwere ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Asjakohasus bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ platvorm Q&A
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na nišš gị ka ị wee chime mgbe ị iwere ihe ga – enyere g ik aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Notchọtaghị otu dabara adaba ma ọ bụ ezuru ohere iji nweta hehe?
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, wewere ike ide nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ, na ngalaba Q&A nke saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji noweta koodu na demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
Quora, vaata, Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&A
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon blogi gi wee gụpụta nke Kevin Muldoon Ọmụmụ ikm na-ere BloggingTips.com suur 60 000 dollarit.
Grammatika – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Hemingway rakendus – Jiri pakub teile sügavat pilti, mis on teile sobiv.
Canva – Chepụta ọmarịcha on ononyonyo nake mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọkachamara Ọtọ – Mepụta kui see on mara mma saidi na iji ndebiri n’efu nahe osise emere.
Ọchịchị Pic – Ngwongwo on emeri kui ntughari nke onyinye.
Piltide graafik – kõik korras.
Foto Foto na Foto Onwere Onwere
Onye Nchọta ikoon – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Ngwa ahịa – Ebe ndekọ on ononyony, kes ei ole fotot enam kui mma nke agbakwunyere kwa izu.
WHSR Ihe Oyiyi Oyiyi – kui nad ei soovi neid enam kasutada.
AkwIAkwọ Eziokwu nke Ụwa – Enweghị ochi egwu – ozi ụwa ozugbo sitere na CIA.
Tehnika Vabariik – Akwọkwọ ,cha, akụk y, yana ụmụmụ gbasara teknụzụ.
Sherpa turundus – Akụkọ azụmaahịa na – akwụghị ụgwọ.
Hubspoti raamatukogu – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
Ụdị Ụgha – Chọta isiokwu na – öko ọkụ kacha ọhụrụ na BuzzFeed.
Ihe okike ihehech – Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
Google’i teavitused – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
Sotsiaalmeedia, Ahịa & SEO
Ngwá Ọrụ veebimeister Google – Google Ngwá Ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
soro – varsa ndị asọmpi gị
Na-aga Bay -Azụ ahịa, ma olen & ngwa ọrụ akpaaka
Tweet tekk – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu armatuurlaud.
Kọlọtọ juhatus – Nnyocha ahịa ahịa mgbasa ozi.
IFTTT – Mbipọta ọdịnaya na niuwe mgbasa ozi ọtụtụ mmadụ na-adị mfe.
Google Analytics – statistika veebis n’efu.
Matomo – otsima Google Analytics Google.
Nch YouTubekọta YouTube – statistika keskkonnas YouTube gị.
WP statistika – ajaveebi WordPress avamine.
Nnyocha Ule – Lelee veebisait zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro veebilehe laadimine ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru $ 100 kwa afọ (erughị $ 10 kwa ọnwa). Ụnụ ego a darere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 kwa afka maka aha ngalaba .com kui see on 60 $ $ kwa afka maka ego nnabata web.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọ ọ bme ebe bụ võrk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Vaatasime, et meil pole ego saiti:
– Otsene mgbasa ozi
– Ederede na biputere postitused nkwado
3. Ka ịmalite ajaveeb n’efu?
Vaadake kogu uut blogi, kus meil on sama ajaveeb, nagu WordPress.com, Tumblr ja Blogger. Iji mepụta blogi n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ịwere ike nike ịmalite ibipiteta ọdịnaya gị.
Oo, noh, ihe na-abịa n’efu n’ụwa anyị. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ alamdomeen dịka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
– Kunagi olime ọrụ, pluginad na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
Ana m atụ aro ka ị pahatahtliku ajaveebi saidi na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke ajaveeb efu, mmụba nke ajaveeb oli uus uus teema.
Ma ei taha seda teha:
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ alamdomeen dị ka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
Vaadake kõiki veebisaidi lisandmooduleid, kuid pole pistikprogramme, kuna meil on sama blogi
Ụtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi, kus gke ajaveebi raha teenida